अंकल हैनन् भुवन - गसिप - साप्ताहिक
साम्राज्ञीको सम्बोधनले दर्शक छक्क परे पनि भुवन भने मुस्कुराइरहेका थिए । आफ्नै छोरा अनमोल केसीसँग अनस्क्रिन रोमान्स गर्ने साम्राज्ञीले आफूलाई भुवनजी भन्दा भुवनको अनुहारमा चमक देखिएको थियो । आफ्ना छोरा अनमोलले साथीझैं व्यवहार गर्ने साम्राज्ञी कुनै बेला भुवनलाई ‘भुवन अंकल’ भनेर सम्बोधन गर्थिन् । सम्बोधनमा आएको यो परिवर्तनको कारण के हुनसक्छ ? साम्राज्ञीले नै यसको जवाफ दिएकी छिन् ।
उनले भनेकी छिन्— ‘मैले त भुवन अंकल नै भनिरहेको हो तर उहाँले नै आफूलाई अंकल नभन्न आग्रह गरेपछि मैले ‘जी’ लगाएर सम्बोधन गरेकी हुँ । ‘उहाँले मलाई अंकल भनेर बूढो नबना भन्नुभएको छ’, साम्राज्ञीको भनाइ छ । हजुरबा भैसकेका भुवन केसीलाई अंकल शब्दसँग यो कस्तो एलर्जी हो ?
आजबाट 'शकुन्तला' प्रदर्शन हुने
साम्राज्ञीका बारेमा को के भन्छन् ?
झुठो आइ लभ यु